Rugby-Junior : Nisavorovoro indray i Malacam, tsy voatolotra ny amboara sy omby
Noroahin’ny US Ankadifotsy an-tery tsy nisy fanolorana ny omby mifahy natao loka ho an’izay tompondakan’Analamanga teo amin’ny sokajy junior, omaly, tetsy amin’ny kianjan’i Malacam Antanimena.
Ny ady sahala izay nisarahan’ny roa tonta, saingy naharesy ambony latabatra ny FT Manjakaray izay nampisavorovoro ny mpanohana ny roa tonta ka nitarika korontana.
Voafehy ihany anefa izany rehefa samy nirava ny roa tonta, saingy ny Bekintana nody tamim-pifaliana raha nody tamin-dranomaso kosa ny ekipan’ny Dakara tamin’ity lalao famaranana ho an’Analamanga junior ity.
"Vao teo am-panaovana ny fanaraha-maso dia efa nomena alalana avokoa ny kapiteny roa tonta hijery izay tsy fanarahan-dalàna misy toy ny fangalaran-taona. Samy nanaiky ny roa tonta teo, saingy tany amin’ny fiafaran’ny lalao vao nampirisihan’ireo mpijery ny kapitenin’i Manjakaray, saingy efa tsy misy azo atao intsony", hoy i Marcel Ramamiarison, tompon’andraikitra teknika eo amin’ny sokajy junior eo anivon’ny ligin’Analamanga.
Na dia nisaraka tamin’ny alalan’ny isa nitovy indray, 14 no ho 14, aza ny roa tonta dia navahan’ny "drops" roa matiny ny Dakara teto. "Ny fitsipika noentina nifehy ny fifaninanana no nahatonga ny faharesen’izy ireo", hoy ihany izy.
Nitarika hatrany am-piandihana teo amin’ny fakàna isa ny ekipan’i Georges Rabenarivo teto, saingy tany amin’ny fizaram-potoana faharoa vao nitsontsorika tanteraka. Nanana tombom-panafihana roa, izay tokony nahazoana isa 6, izy ireo teo amin’io fizaram-potoana faharoa io, saingy tsy matin’i Fanjava avokoa ireo fitsarana fahadisoana na dia nifanitsy tamin’ny "H" aza izany. Ny JSM no hiady ny lalao famaranana ho an’ny « inter-section » junior amin’ny alahady ho avy izao eny an-toerana.